I-Auphonic: Sebenzisa i-Podcast Audio yakho ngokucofa kube kanye | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Matshi 17, 2017 NgoMvulo, Septemba 4, 2017 Douglas Karr
Xa sakha eyethu Uluntu lwaseMartech, besisazi ukuba kuya kuba luncedo kuthungelwano olukhulu lwabafundi ukuba bahlaziye kwaye babelane ngolwazi abalufumeneyo. Xa ndibhalayo malunga nepodcast audio, UTemitayo Osinubi kwabelwane ngesixhobo esimangalisayo esibizwa I-Auphonic. Ngaphandle kokuba uyinjineli yesandi, ukubamba umsindo kwiipodcast zakho kunokuba ngumsebenzi otyhafisayo. Kwaye izixhobo zokurekhoda ezinje Igadi musa ukubonelela kakhulu ngendlela yezixhobo zokwenza ngcono - kuya kufuneka wazi ukuba yintoni amandla okwenza oko.
UTemitayo wandikhomba kwicala le I-Auphonic, esekwe kwiwebhu kunye nedesktop esekwe isicelo esenza ukuba bobabini ubutyebi kunye nevolumu yomsindo wakho wepodcast. Itekhnoloji inokumisela kwakhona umzila omnye apho isithethi esinye sikhulu ngakumbi kunesinye… intle kakhulu. Ndikunike uvavanyo lokuqhutywa kunye nenye yokurekhodwa kwam kwaye bendirhintyelwe ngoko nangoko ndaza ndathenga zombini usetyenziso lwe desktop-enye yokusebenza kwethrekhi enye kunye nenye yokwenza imisebenzi emininzi.
Inqaku elisecaleni: UTemitayo wenza udliwanondlebe nam kwipodcast yakhe kwaye yayilixesha elimnandi- mamela apha.
The Umlawuli weAuphonic ukrelekrele Iprosesa yeFayile yeAudio yeDesktop ehlalutya iaudiyo yakho kunye nokulungisa umahluko wenqanaba phakathi kwezithethi, phakathi komculo nentetho naphakathi kweefayile ezininzi zomsindo ukufezekisa isandi esilinganiselweyo ngokubanzi.
Ibandakanya Umda wePeak yeNyaniso, iithagethi eziqhelekileyo Imigangatho yokuqaqamba (EBU R128, ATSC A / 85, iiPodcasts, iselfowuni, njl.njl.) Kwaye ngokuzenzekelayo Ingxolo kunye nokuNcitshiswa koHum izilungelelwaniso.
I-Auphonic Leveler yiyo iyafumaneka kwiMac OS X 10.6+ (64bit) kwayeWindows 7+ (32bit okanye 64bit).
Auphonic Multitrack ithatha iindlela ezininzi zokufaka iingoma, ihlalutye kwaye iyenze nganye nganye kwaye idityaniswe kwaye yenze ukuxubana kokugqibela ngokuzenzekelayo. Ukulinganisa, uluhlu olunamandla lokucinezelwa, ukugoba, ingxolo kunye nokuncitshiswa kwe-hum, ukususwa kwe-crosstalk, ukuntywila kunye nokucoca kungasetyenziswa ngokuzenzekelayo ngokokuhlalutya komkhondo ngamnye. Ukuqheleka kokuqaqamba kunye nokusikelwa umda kwinciphiso kuyasetyenziswa kwi Umxube wokugqibela.
Auphonic Multitrack ngu eyakhelwe iinkqubo ezilawulwa yintetho kwaye iyafumaneka Mac OS X 10.6+ (64bit) kunye Windows 7+ (32bit okanye 64bit).
Ezinye zezinto ezintle zokuhlengahlengisa ingxolo zibandakanya:
Isiguquli esihambelayo: I-Adaptive Leveler ilinganisa umahluko wokuphakama, isenza umkhondo uphakame ngakumbi nangakumbi.
Icebo lokucoca ulwelo iPasi ePhakamileyo: Isihluzi sePasi ePhakamileyo sisusa ukuphazamiseka kwamaza asezantsi kuyo yonke ingoma.
Ingxolo kunye nokuNcitshiswa koHum: Eli nqaku lisusa isandi sangasemva kwingoma, nokuba kukho umahluko. Eli nqaku lisusa ngokupheleleyo umgca womnatha wokurekhodwa.
Umnqamlezo: Nanini na xa isandi esifanayo sirekhodwa kwiimakrofoni ezimbini ezahlukeneyo, eli nqaku lisebenzisa umkhondo ophambili. I-Crossgate ikwasebenza ukucima ngokupheleleyo ingxolo ye-echo.
Kudala ndizisebenzisa zombini ezi zicelo kwaye kufanelekile ukuba zenze imimangaliso. Ndandinomsindo omkhulu kwenye yee-podcast zam kwaye, ngelishwa, yayibaxiwe ingancitshiswanga emva kokuba ndiyiqhubile. Nangona kunjalo, ndiyithanda kakhulu le seti yezixhobo kwaye ndinemiphumo engakholelekiyo ukuza kuthi ga ngoku! Enkosi kuTemitayo!
tags: Umlingisi oguqukayoUkulungiswa komsindoauphonicUmlingisi we-auphoniciprosesa ye-auphonic multitrackUmnqamlezoIsihluzi sePasi ePhakamileyoinqanaba itunesitunes isixhoboimultrackIngxolo kunye nokuNcitshiswa koHumizixhobo zepodcasttemitayotemitayo osinubiisixhobo sevolumu